PressReader - Isolezwe: 2018-04-17 - Mukhulu umsebenzi wezinkundla zokuxhumana
Mukhulu umsebenzi wezinkundla zokuxhumana
kunokunaka obasi bakhe okuyithina. Bamthola bamthathela izinyathelo nomphathi wakhe.
Ngijabulile futhi ngibona ezokuxhumana ziveza ukuthi umnyango ophethwe nguNgqongqoshe u-Angie Motshekga weMfundo eyiSisekelo awuzinakile izikole zasemakhaya ngokuthi kuze kwafa ingane ngenxa yamathoyilethi angaphephile. Konke lokhu kwenze wasukumela phezulu umnyango wanikwa umnqamulajuqu wuMengameli Cyril Ramaphosa ukuba usebenze.
Ngeke ngikhohlwe yisehlakalo sokuhlaselwa kothisha nokulwa kwabafundi ezikoleni lapho uNgqongqoshe wezeMfundo eGauteng uMnuz Panyaza Lesufi wasukumela phezulu ngenxa yazo njalo izinkundla zokuxhumana ezilekelela uhulumeni wethu. Konke lokhu kukubeka ngokusobala ukuthi uhulumeni kumele simbikele kwezokuxhumana ngoba uma silandela imigudu kuphela iminyaka kulokhu kuthiwa “udaba lwakho siyaluphenya”. Ukuphenywa kodaba kwenza ukuba siphephele kwezokuxhumana ngoba sisuke sibabona nabaholi kuzona ngakho-ke kumele kusetshenziswe zona babikelwe. Mina ngibona ezokuxhumana zizoletha isixazululo ebantwini abavota futhi bazosizakala ngazo uma bebika udaba lwabo.
Ngeke ngalulibala olwami udaba engalubika ngeSassa kuzo belu ezokuxhumana lwasukunyelwa ngokushesha ngoba lwabikwa kuzona. Ngithi abantu abazwane nezinkundla zokuxhumana ukuze basizakale. Khabzela Mzimela EZWELIBOMVU